#Ciidamada DFS oo Howlgalo ka wada Wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo - Get Latest News From Horn of Africa
#Ciidamada DFS oo Howlgalo ka wada Wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo
By On Dec 27, 2018 Last updated Mar 31, 2019
Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa howl-gallo lagu xaqiininayo ammaanka ka wada Waddada isku xirta Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhaba.
Taliyaha Ururka 35-aad Guutadda 7-aad qeybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Korneyl Maxamed Caraaye “Foofoo” ayaa warbaahinta u sheegay in howl-galkaasi uu ku wajahnaa la dagaallanka Al-Shabaab iyo sifeynta Kooxo Burcad ah oo dhibaateeya Dadka Waddada ku safraya , iyaga oo kulabisan direyska Ciidanka.
Dadka Shacabka ah ee ku nool degaannada u dhexeeya Muqdisho iyo Baydhaba ayuu sheegay Taliyuhu in ay la leeyihiin xiriir wanaagsan.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan la leennahay xiriir aad iyo aad u wanaagsan, sida aad la socoto Shacabku waxa ay ku jireen dhibaatooyin fara badan oo uu Al-Shabaab u geystay, sida Xoolaha oo laga qaato, Beerahooda oo layska tacbado, sida la doono oo laga yeesho” ayuu yiri taliyuhu.
Col; Caraaye ayaa sheegay inay taasi u fududeystay kala war qaadasho iyaga iyo shacabka h, iyagoo ogaaday halka ay ku sugan yihiin iyo goobaha ay iska soo abaabulaan, wuxuuna sheegay inay Ciidanku Dadkaasi u fidiyaan gargaar Bini-aaddannimo.
Taliye, Caraaye, ayaa intaa raaciyay in ammaanka waddada uu aad usoo hagaagayo tan iyo intii ay howl-gallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Burcadda kale ka billowdeen halkaas, imikana laysku halleyn karo.